Emva kokuthola Montenegro ukuzimela ngamazwe e 1878. Kuleli amanxusa edolobheni washesha ukusungula enobudlelwane nge iparele Adriatic. Kwenzeka isimanga ukuthi lesi simo, okuyinto has izihloko ezimbili kanye nezivakashi, efika ezweni elisha, abazibuza yona datacenter ngezingxenye zalo eziyinhloko.
Inhloko-dolobha ye-Montenegro: Cetinje futhi Podgorica?
Umuzi omkhulu isimo zanamuhla Podgorica, okuyinto ekhulwini leminyaka elidlule kuze kwaba esemthethweni inhlokodolobha Montenegro. Kukulo muzi lapho kukhona izikhungo ebaluleke uhulumeni, uhulumeni kanye lephalamende. Nokho, inhloko-dolobha mlando kusukela ezikhathini zasendulo ubhekwa Cetinje - isikhungo samasiko nezingokomoya yezwe.
Edolobhaneni elincane yokuhlala umongameli kanye Metropolitan. Ngokusho izakhamuzi zendawo, ukuvakashela izwe elihle, igcwele umdlandla njengoba eziphathelene ngemvelaphi yabo kwamasiko, futhi ungaboni Museum idolobha, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko - manje ubugebengu izivakashi.
Umlando edolobheni ekhazimulayo
Ukuvela Cetinje (Montenegro) lihlotshaniswa Ivanom Chernoevichem - uMbusi Bold, ngicindezelwe abaseTurkey. Ngo 1482 Prince Valiant ukanye nezikhonzi zakhe ababebalekele esinqeni Lokhozi Izintaba, lapho afike wasungula khona Isigodlo ukuthi waba uphawu lokuhlala ukuzimela, futhi eduze kwalo kwakukhona Cetinje, abathola isihloko Lobu-Orthodox BaseSerbia imbeleko. Izakhamuzi alwa heroically ngokumelene abaseTurkey wabhubhisa esigodlweni sezindela sangakubo. Nokho, kodwa yabuye yakhiwa kabusha e 1701, futhi iphuzu okunjalo okungokwenkolo kwezinhloso zenzuzo safinyelela kuzuze izizukulwane ezaziyolandela.
Emlandweni umuzi ukwehla, lalahlekelwa abaseTurkey kanye baseVenice, Palace of the Crnojevic lwamakhosi labhujiswa. Sokuthuthwa kwempahla Cetinje (Montenegro) lihlotshaniswa egameni leNkosi Nikoly Negosha, owayala ukwakha izigodlo nezakhiwo zokuqondisa. Ngemva ekumenyezelweni kukazibuse isimo iba Cetinje agcwele iyinhloko-dolobha, futhi kule nkathi uqala ukwakha emikhulu yokugogobala zasebukhosini zamanxusa, okuyinto manje iyisonto Museum. Ngo-1910, kubonakala iNdlu Uhulumeni - uphawu kahle kwemandla embuso, futhi ngaleso sikhathi-ke sasisincane kunazo zonke-inhloko-dolobha elinabantu abantu bengekho ngaphezu kwama-ayizinkulungwane eziyisihlanu.
Ngemva wokuQala nowesiBili Umhlaba Izimpi, umsebenzi dolobha e Cetinje zinyamalale, kodwa yena namanje kubhekwa isikhungo esiyinhloko ezingokomoya baseMontenegro. Manje uhlala lapha abakhileyo ayizinkulungwane 15.
izivakashi isikhungo wezwe
Uhulumeni wenza konke okusemandleni ukuthuthukisa nengqalasizinda yezokuvakasha, ngoba isikhathi eside izivakashi zakwamanye amazwe indiva lo mkhuba, futhi leli dolobha lakhula kuphela njengenhlangano isikhungo ezimbonini. Nokho, lapho kuwa emnothweni sezenhlalo zonke izimboni ivaliwe. Idolobha lanamuhla linikeza izivakashi zayo ukuhlola eziningi ezikhangayo zomlando kanye nemvelo emangalisayo, ubuhle bazo ngeke unike noma iziphi izithombe.
Isimo sezulu Climate dolobha kwamasiko
Charming Cetinje (Montenegro) itholakala ku-ngasempumalanga yomuzi esibheke Massif Lovcen, emithambekeni okuyizinto izihlahla eziluhlaza, okwenza isikhungo samasiko-panorama wezwe ubukeka amazing.
Umuzi akabashiyi ubani nandaba, has a ukhululekile izivakashi esipholile sezulu yezwekazi, elinesimo ehlobo efudumele futhi omile futhi kubanda kakhulu, kodwa ebusika ezimanzi. Autumn igcwele imvula njalo, kanye nesikhathi ukhululekile kakhulu ukuvakashela Montenegro inhliziyo - kusuka July kuya ku-September, lapho ukushisa luyaphela, imvula okwamanje.
Isigodlo seNkosi Nikola
A emzaneni omncane ehlanganisa amakota ezimbalwa, inomlando ocebile, kodwa ngezindinganiso eminye imizi isimo, usenguye esemancane. Inzalo olukhulu izivakashi kubangele izikhumbuzo zamasiko nezomlando wadala emakhulwini ambalwa eminyaka edlule.
IRoyal Palace - lokhu ingenye ezikhangayo main Oziqhayisayo inhloko-dolobha Montenegro lasendulo. Cetinje uyaziqhenya lesikhumbuzo zamasiko nezomlando, sithwele abantu abavamile igama "Umunwe". It Kwakhiwani kusuka 1863 kuya 1867. Inkosi Palace wamshaya abakhileyo okunethezeka ngisho kubange European izikhulu inhlebo, xoxa ingcebo. Art Nouveau isakhiwo igcwele imininingwane zokuhlobisa kanye namafomu yokuqala, futhi ngamunye ekamelweni lakhe is ngamunye yakhelwe.
Isigodlo King Nikola sika - is isakhiwo mlando usebhekene emifanekisweni eziningana, kodwa Interiors kanye ifenisha azishintshile futhi ziyojabula ngisho wabona izinhlekelele eziningi ngaphambili izivakashi ngengcebo yayo enkulu. Manje wavula khona National Museum, iqoqo eliyingqayizivele okuyinto ukutshela mayelana umlando kanye namasiko Montenegro kusuka Ephakathi.
Edolobheni elincane Cetinje (Montenegro), lapho akunakwenzeka ukuba ulahleke, zivela ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba kwamakholwa angama-Orthodox ukubona izinsalela Christian lamathempeli. Yiqiniso, ingcebo yakhe eyinhloko indlu yezindela efanayo, ezakhiwe Grand Prince Ivanom Chernoevichem. Kwakuyisikhathi sokunyathelisa, futhi incwadi yokuqala, eyabonakala endaweni aseBalkan, ayebhalwe Cyrillic zamagama. Manje ungabona siyindlala yangempela Museum wendawo.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-500, kuba yokuhlala eyinhloko Montenegro basemasontweni elisedolobheni mlando sezindela sasendulo. Cetinje eMontenegro uvame ukubizwa ngokuthi isikhungo ngokomoya wombuso, ngoba lokhu lesikhumbuzo zenkolo kubhekwa inhliziyo futhi uphawu lamazwe Orthodox. Lapha amanga shrine okubangela novalo phakathi kwamaKristu - ingxenye engu- eGolgotha, lapho uJesu wabethelwa khona esiphambanweni, futhi isandla St Ioanna Krestitelya.
Uma Isigodlo lalifana uthango izimbobo azungezwe zazo bemba imigodi yesisekelo ukuzivikela iluphu. Futhi manje-ke yindawo ethokomele nge inani elikhulu izakhiwo Orthodox. Nokho, ukuvakashela ke, kumelwe ukuvala ekhanda, emahlombe futhi imilenze phambi izinceku sezindela ukunikeza isiqondiso eyengeziwe ku ukuthi baziphathe kanjani ngaphakathi kuwo. Nakhu kufika abantu yenza ngokuphelelwa yithemba, futhi ngamadolo encenga okuthile ngaphandle okungakwazi baphile.
Ngenhla Luhambo esemqoka yedolobha, phezulu enta-beni, iyona Mausoleum uMbhishobhi Daniel njengoba indlwana encane. Isigodlo ivuliwe Museum ezithakazelisayo ukuthi ubamba basemasontweni ingubo, izincwadi endala kunyatheliswe futhi ngesandla.
Futhi inhliziyo eziyinkimbinkimbi zenkolo isonto kukaJesu Blessed Virgin Mary, okungelinye igama - Vlashka.
somlando uvele 1450 futhi ukwakhiwa endala ka Cetinje (Montenegro). Sikhuluma esontweni, elakhiwa ngabelusi. It wayedabuka eqhugwaneni bakudala eyenziwe amagatsha, ezigcotshwe emhlabeni. Kamuva ithempeli kwaluqinisa kakhulu, kanti isakhiwo, okubonakala phambi kwamehlo izivakashi, uye yinguqulo yokugcina 1864. Lapho bakha uthango yesonto, lalisetshenziswa abaseTurkey izikhali esishiywe dengwane. Kuyaziwa ukuthi immured nengxenye imiphongolo zezinkomo eziyinkulungwane indondo.
Ithempeli elibuyiselwe okunabileko kukhona eqoshiwe esiyingqayizivele ngesiGreki, kahle walondoloza izikhathi zethu. Eduze endaweni engcwele yamathuna lapho bangcwatshwa abantu abaningi abadumile isimo. Ngo-1939, okuphambene esontweni efakwe ebaziwe "Lovcen Soul" omelela abakhileyo Montenegro ababezama yathuthela Melika ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala, kodwa aminze olwandle ngasogwini Albania.
Cetinje epholile (Montenegro) futhi ezikhangayo abonisa emashumini yayo ocebile esedlule eziningana kuyinto izivakashi isikhungo esibalulekile isimo, ngoba konke ukuhlala eceleni zingakwenza uqabuleke. Baningi nokuzwa beckons izivakashi sokuvuma uthando ayekanye naye emzini wokungenisa izihambi.
Izivakashi ukugubha emkhathini ekhethekile we dolobha Montenegro yesibili. Lihlala sokuthula nokuzola, futhi Cetinje egxilile ezweni laseNodi, okuyinto ethandwa kakhulu nalabo abafuna ukubalekela umsindo amadolobha.
yokuzijabulisa Jaded resort idolobha intsha kubhekwe ngempela isidina, kodwa kule kudalwa, ethulula phezu isikhungo samasiko, futhi sici esiyinhloko. Lokhu akuveli ukuzijabulisa kanye bethenga, lena yindawo enhle lapho ungakhululeka ingqondo yakho, ningathinti umlando futhi ujabulele uthando ne eziningi izikhumbuzo zomlando.
Amazing Cetinje (Montenegro), ogama ezikhangayo idluliselwe kwenkathi edlule - ukuvakashelwa oyisibopho emzini, ngoba ngeke zingene ngokugcwele magic walo ukupela, futhi akukho izivakashi ngeke senqabe uhambo entsha endabeni ethule.
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Umhlangano Indawo ayikwazi ukushintshwa": abalingisi, esibathandayo futhi khumbula